PSG oo xidig muhiim ah ka dooneysa Tottenham, kadib markii ay ku guuldareesatay saxiixa Rakitić – Gool FM
PSG oo xidig muhiim ah ka dooneysa Tottenham, kadib markii ay ku guuldareesatay saxiixa Rakitić
(PSG) 26 Agoosto 2018. Wargeyska “The Sun” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ay wali raacda ugu jirta inay sameyso saxiixa xidig khad dhexe, maadaama uu dalabkan ka yimid macalinka kooxda Thomas Tuchel.
PSG ayaa haatan indhaha la raaceysa saxiixa xidiga khadka dhexe kooxda Tottenham Christian Eriksen, waxayna doonaysaa inay sameyso kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga.
Maamulka kooxda PSG ayaa waxay ku fashilmeen raacadada ay ugu jireen saxiixa laacibak kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic, kadib markii uu laacibka ku adkeestay inuu sii joogayo safka Blaugrana, taasoo ka dhigtay inay indhaha markan la raacaan saxiixa Christian Eriksen.
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar la yihiin bixinta aduun dhan £ 100 million, si ay u sameeyaan saxiixa 26 jirkan kooxda Tottenham maalmaha ka harsan suuqan xagaaga.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in heshiiska Christian Eriksen uu ka harsan yahay laba sano, maamulka Spurs-ka ayaana doonaya inay ka saxiixdaan heshiis cusub ay ku ilaashanayaan adeegiisa.
Goolhayihii Liverpool dhaafiyay Champions League oo ka tagay Premier League….+SAWIRRO
SAFAFKA Rasmiga ah ee Newcastle United vs Chelsea... (Hazard iyo Kovacic oo lagu soo bilaabay)